မန်းသူမန်းသားတွေရဲ့ မန်းဂဇက် အပိုင်း ( ၃ ) – DIAMOND KEY | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » မန်းသူမန်းသားတွေရဲ့ မန်းဂဇက် အပိုင်း ( ၃ ) – DIAMOND KEY
Posted by black chaw on Jan 17, 2012 in Myanmar Gazette, Opinions & Discussion | 43 comments
မန်းဂဇက်ရဲ့ အခိုင်အမာ အင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့ မန်းသူမန်းသားတွေထဲမှာ ကိုစိန်သော့ က ထင်ရှားပါတယ်။
ဓါတ်ပုံကောင်းကောင်း လေးတွေ ရိုက်ပြနိုင်ရုံမက ဓါတ်ပုံ ပညာပေးဆောင်းပါးလေးတွေနဲ့ ရွာထဲက ဓါတ်ပုံပညာ စိတ်ဝင်စားသူတွေကို ပညာမျှဝေပေးနိုင်စွမ်းရှိသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူကြီးက sticky လုပ်ခြင်းကို မကြာမကြာ တွေ့ရတတ်တဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ပါ။
သူ့ပို့စ်လေးတွေ ရသလောက် ရှာဖွေစုစည်းပေးထားတာပါခင်ဗျာ။
မြန်မာ့မီးရထားနှင့် ကျွန်တော်တွေ့ ကြုံခဲ့ရသည်များ ၁
မြန်မာ့မီးရထားနဲ့ ခရီးသွားအတွေ့အကြုံလေးကို ရေးထားတာပါ။ သို့သော် ကွန်းမန့်တချို့မှာ
အနီကတ်တွေ ပြထားတာတော့ နားမလည်တော့ဘူးဗျာ။ ကိုယ်တိုင်သာသွားကြည့်ကြပါတော့။
ဒါလည်း ၁ ရဲ့ အဆက်ပါ။ ဒီမှာတော့ သူ့အမြင်လေးတချို့ကို ဒီလိုရေးပြထားပါတယ်။
မြန်မာ့ မီးရထားလုပ်ငန်းကြီး တိုးတက်ဖို့တော့ မစဉ်းစား မလုပ်ကြပဲ လက်မှတ်ရုံမှာ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရမယ် ကုလားက လက်မှတ်ရောင်းနဲ့ ပေါင်းပြီး မဟုတ်တာတွေ လုပ်နေတော့ ဘူတာပတ်ဝန်းကျင်တွေ ညစ်ပတ်၊ တွဲစောင့်တွေက တွဲမစောင့်ပဲ တွဲပေါ်မှာ ရှာစား၊ ရထားကြီးပေါ်မှာလဲ မီးရထားရဲ၊ တွဲစောင့်တွေ၊ လက်မှတ်စစ်၊ ဂတ်ဗိုလ်နဲ့ စက်ခေါင်းမောင်း အုပ်စုဖွဲ့ လုပ်စားနေကြပါတယ်။ အဲဒါတွေလည်း ဘယ်လိုသိခဲ့ ရသလဲဆိုတော့ ရထားကြီးက တစ်ခါတစ်ခါ အရှိန်လျှော့ပြီး ဖြေးဖြေးမောင်းပေးနေတုန်းမှာ လမ်းက စောင့်နေကြတဲ့ ဈေးရောင်းမယ့်သူတွေက တပ်နဲ့ချီ တက်လာပါတယ်။
ကျန်တဲ့ တွဲတွေပေါ် ဘယ်နစ်ယောက်များတက်ကြတာ မသိပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ တွဲမှာတော့ အပြည့်ပါပဲ။ တွဲပေါ်ရောက်တာနဲ့ သူတို့ချင်း ပိုက်ဆံတွေ လိုက်ကောက်နေကြပါတယ်။ ဂတ်ဗိုလ်နဲ့ စက်ခေါင်းမောင်း ကဘယ်လောက်၊ လက်မှတ်စစ် အဖွဲ့ဘယ်လောက်၊ ရဲကြေးက ဘယ်လောက်နဲ့ ပွက်လောရိုက်နေလိုက်ကြလို့ သိလိုက်ရတာပါ။
ဒီတော့ မြန်မာ့မီးရထား လုပ်ငန်းမှာ အရှုံးနှင့် ရင်ဆိုင်နေရတယ် ဆိုတာက…………………….။
ဒါကတော့ ဓါတ်ပုံလေးတွေ ဖေါ်ပြပြီး သွားခဲ့တဲ့ တောင်ပြုန်းပွဲအကြောင်း ရေးထားတာပါ။
ဒီပို့စ်မှာလည်း ကွန်းမန့် တချို့မှာ အနီကဒ်တွေနဲ့ ကိုစိန်သော့ကြီးရေ။
ဒီပို့စ်လေးကတော့ ကိုစိန်သော့ရဲ့ ကျောက်ဖြူမြို့သွားတောလားလေးပါ။ လေယဉ်ပေါ်ကရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေတောင် ကြည့်ရမယ်ဗျာ။
ကိုလင်းဝေကျော် ရဲ့ ကွန်းမန့်လေးကို ဖေါ်ပြပေးချင်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်လေးကတော့ ကျွန်တော် အလွန်အကြိုက်တွေ့ခဲ့တဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ခုပါ။ ကိုစိန်သော့က သူ့အိမ်ကလေးအကြောင်းကို ဒီလိုရေးဖွဲ့ပြပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့လက မန္တလေးမှာ အိမ်လေး တစ်လုံး ဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ထပ် အိမ်လေးပါ။ အိမ်ရှေ့ မျက်နှာစာမှာ ဝရံတာလေးတွေပါတယ်။
ဝယ်ချင်နေတာ ကြာလှပြီ ဖြစ်ပေမဲ့ အခြေအနေ အကြောင်း အမျိူးမျိုးကြောင့် မဝယ်ဖြစ်ခဲ့တာ အခုမှ ဝယ်ဖြစ်တာပါ။
ပျဉ်ခင်းပျဉ်ကာ အိမ်ကလေးဖြစ်ပေမဲ့ ဈေးကတော့မသေးပါဘူး။
ရောင်းတဲ့ မူလ အိမ်ပိုင်ရှင်က မရောင်းခင်မှာ သူ့အိမ်လေးကို အရမ်းကိုပဲ ညွန်းဆိုပါတယ်။
သာမန် ဖြစ်စလက်ခတ် သစ်တွေနဲ့ ဆောက်ထားတာ မဟုတ်ပဲ ကျွန်းသားများ ဖြစ်ကြောင်း၊ မိုးထဲ ရေထဲမှာ ကြာကြာခံတဲ့ အတွက် ဝယ်ရတာ တာရှည်မှာ တန်ကြောင်းဆိုပါတယ်။
အိမ်လေးကို ဆေးလည်း အကောင်းစားနဲ့ သုတ်ထားပြီးပြီလို့ မွန်းပါတယ်။
ရောင်းရအောင် ဘယ်လောက် ညွန်းသလဲဆို ကျွန်တော်ရှေ့  မှာပဲ ရောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပုံစံတူ အိမ်တစ်လုံးကို အရာရှိတစ်ယောက် ကြိုက်လိုဆိုပြီး ဈေးတောင်မဆစ်ဘူး၊ ဝယ်သွားတယ်လို့တောင် ဆိုပါတယ်။
ခေါ်ဈေးက ၂,၀၀၀ တောင်အော်ပါတယ်။ ရောင်းတဲ့ မူလ အိမ်ပိုင်ရှင်ကို ဈေးဆစ်တာ ၁၈၀၀နဲ့အရောင်း အဝယ် တည့်ပါတယ်။
ကျွန်တော် အတွက်တော့ ကိုယ်ဘာသာကိုယ် ဝယ်ဖူးပြီ ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ အိမ်လေးပေါ့။
ဒါပေမဲ့ မချမ်းသာတဲ့ ဘဝမှာ ရှိတာလေးနဲ့ လှအောင်ဝတ်၊ ရတာလေးနဲ့ ဝအောင်စားနေရတာ ဆိုတော့ အထက်မှာ
ကိုယ်မျော်လင့် သလို အရာရာ ကတော့ တမဟုတ်မှာ ဘက်စုံ ဘယ်ပြည့်စုံ နိုင်မှာလဲလေ။
ဒီတော့ ရှိတာလေး၊ ရတာလေးနဲ့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒလည်းရအောင် အထက်မှာပြောခဲ့ သလို အိမ်လေး ဝယ်ဖြစ်တာပါ။
အိမ်လေးလို့ပြောရတာက အိမ်ကြီး မဟုတ်လို့ပါ။
အိမ်လေးက လူနေလို့တော့ မရပါဘူး။
စာကလေးတွေရဲ့ အိမ်လေးတစ်လုံးအကြောင်းကို ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ ရေးထားတဲ့ ကိုစိန်သော့ရဲ့ ကြည်နူးစရာအိမ် လေးပါ။
ကမ္ဘာကျော်တဲ့ မြန်မာ့ရွာကလေး မင်းကွန်း
ဒီပို့စ်လေးကတော့ မင်းကွန်းကို အမြင်ဆန်းတဲ့ ရိုက်ချက်ကလေးတွေနဲ့ တင်ပြထားတာပါ။
စာတွေကလည်း ဖတ်လို့ကောင်း ပုံတွေကလည်း ကြည့်လို့ကောင်းပြီး ကွန်းမန့် ၃၄ ခုမှာလည်း
အနီတွေ ပြထားလိုက်ကြတာ အံ့သြစရာဗျာ။ မယုံရင် အခုချက်ခြင်းသွားသာကြည့်ကြဗျာ။
တောင်သမန်အင်းရဲ့ ကိုစိန်သော့ ရှယ်လက်ရာ ဓါတ်ပုံလေးတွေပါဗျာ။
ဒါလည်း ဓါတ်ပုံပို့စ်လေးပါပဲ။ ကွန်းမန့်တွေမှာလည်း အနီတွေ ချည်းပဲဗျ။
အောင်မယ် ကျွန်တော့်ကွန်းမန့်ကိုတော့ မနီထားဘူး။ လူဆိုးတွေ။
ဒီပို့စ်လေးကတော့ ကိုစိန်သော့ပို့စ်တွေထဲမှာ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးလို့ကို ပြောလို့ရတဲ့
ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ ရေးထားတဲ့ အက်ဆေးလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ ရှဉ့်လေးတွေရယ် စာကလေးတွေရယ် နဲ့ ကိုစိန်သော့ရဲ့ ရှယ်လက်ရာဗျ။
တမုတ်မြို့ဟောင်း တစ်နေရာ (ရှင်ပင်ရွှေဂူကြီး မြတ်စွာဘုရား)
သမိုင်းနှင့်တကွ ရှင်းပြထားတဲ့ ဓါတ်ပုံပို့စ်လေးပါ။ ကိုစိန်သော့ပရိသတ်တွေ ကျေနပ်ခဲ့တဲ့ ပို့စ်လေးပါ။
မက္ခရာ မြို့ဟောင်း ကို ဓါတ်ပုံလေးတွေ ရိုက်ပြထားတာပါ။ ဓါတ်ပုံတွေကတော့ ကိုစိန်သော့ရဲ့ ထုံးစံ လှတယ်ဗျာ။
“ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စအတွက် တွေ့တဲ့နေရမှာ ရရာပစ္စည်းနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အသုံးပြုနည်း” တွေပေ့ါ။
လို့ဆိုထားတဲ့ စားအုန်းဆီဗူးတွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဖေါင်လေးတစ်ခုပုံ လေးပါ။
ပြင်ဦးလွင်က ပွဲကောက် ရေတံခွန် နဲ့ ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ် အလှ
လယ်တွင်းနယ်က ခေတ်ငါးခေတ် ထပ်ဆင့်ကုသိုလ် ရှင်ပင်ရွှေဆပ်သွား
ကျောက်ဆည် ဝေဘူတောင် ဓါတ်ပုံလေးတွေပါဗျာ။
အောက်မှာဖေါ်ပြမယ့် ဓါတ်ပုံ ပညာ မှတ်စု ပို့စ်တွေကတော့ ဓါတ်ပုံပညာလိုက်စားနေသူတွေအတွက် တန်ဘိုးရှိမယ့်ပို့စ်တွေပါခင်ဗျာ။
ဓါတ်ပုံပညာ မှတ်စုများ ၁။
ဆည်တော်လေး (သို့) မန္တလေးကချောင်းသာ
နိဗ္ဗာန်သွားလိုသူတွေ အတွက် အထူးနေရာတွေ ရှိနေပြီ
ကိုစိန်သော့ ရဲ့ VIP ဖွဲ့ပါခင်ဗျာ။
ရှေးရိုးရာ တစ်ဆယ့်နှစ်ဌာန ရွှေချလှုစရာ ပုဂံရွှေစည်းခုံမှာ
လမ်းပေါ်က အန္တရယ် ဖြစ်စေနိုင်တာကို ဓါတ်ပုံလေးရိုက်ပြပြီး ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ။
သူကြီးရဲ့ sticky ပို့စ်လေးပါ။ အနီကတ်တွေနဲ့ ကွန်းမန့်တွေက မိုက်တယ် ကိုစိန်သော့ရေ။
အောက်က ပို့စ်လေးတွေကတော့ ကိုစိန်သော့ရဲ့ မလေးရှား အခန်းဆက် စီးရီးပါခင်ဗျာ။
မလေးရှားသို့ တစ်ခေါက်တစ်ခါ ၁
ကိုစိန်သော့ ရဲ့ အိမ်ကလေးပါ။
အဲဒီလူတွေ နေပူပူမှာ ဟင်းကောင်းတွေနဲ့ ဆွဲရေးတဲ့။
တူးဆွသူက မမောနိုင်မပမ်းနိုင်တူးပေးတော့ ပြန်ခံစားရတာပေါ့ဗျာ။
သူကလဲ ဆရာတပါးဘဲဗျနော။ ဆရာစိန်သော့ကို ကိုဘလက်က ဖော်ကောင်လုပ်ခြင်းကတော့
“အိမ်” ကလေးပုံ ပါလိမ့်မယ်လို့မှန်းထားသေးတာ ကွက်တိ။
ကျေးဇူးပါ ကြည်နူးဘွယ် စာ၊ဓာတ်ပုံများအတွက် ကိုစိန်သော့ရေ။
ကိုသစ်ရေ၊ တစ်ခြားအကြောင်းလေးတွေကတော့ အစီအစဉ်လေးတွေ လုပ်ပေးတဲ့ ကိုပေါက်ရဲ့ ရှိချက်လေးတွေ မန္တလေးရောက်မှ တိုးတိုးတွေ ပြောမယ်။
ကျွန်တော့ရဲ့ အိမ်လေး အမှတ်တရ ရှိတာလေးအတွက် Thanks ပါနော်
ဟိုတလောက ရွာထဲ… ခေတ္တပျောက်နေတဲ့ ကိုသော့ ရဲ့ မှတ်တမ်းပဲဗျို့….
…ကျနော် မဖတ်ရသေးသော ..ကျော်သွားသော ကိုသော့ ရဲ့လက်ရာအချို့ကို
အားပေးနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် …ကျေးကျေး ဘဘ ဘလက်ရေ့ …
ဆြာဂီရေ၊ နော်တို့ လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်က နှစ်ကုန်တွေဆို အလုပ်များတော့ ကိုယ့်အတွက် အချိန်မရတာပါဗျို့။ စိုင်တွေနဲ့ စိုင်ဆြာကိုတော့ လုံးဝမမေ့ကြောင်းပါခင်ည
မိုးဇက်ရေ ၊ တစ်နေ့ကတော့ မမက မန္တလေးသား စကား လို့ ကြားဖူးတာ ဆိုပြီး ပြောသွားတာပဲ။
စကားလေးနဲ့ ပြောပြနေမယ့် အစား လက်တွေ့လေးသာ ပြခွင့်ပေးပါလေ
ကိုစိန်သော့ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ဦးကြောင်နဲ့မိုးစက်မှားရတာတုန်း
ှုဧည့်ခံမယ့် အကြောင်းလေး ပြောလိုက်တာ၊ ဘယ်လိုများ ဦးကြောင်နား ပြေးကပ်သွားတာလဲမသိ…………….. 80
ကိုစိန်သော့ရဲ့ အိမ်ကလေးကိုဖတ်ပြီး ၃ ထပ်အိမ်တစ်လုံး၊ ၂ ထပ်အိမ်တစ်လုံးကို ၅၀၀၀ နဲ့ ပေးဝယ်လိုက်တဲ့ ရွာသူတစ်ယောက်ရှိတယ် ….
အမယ်…. ဒါဆို နော့်လိုပဲ အိပ်ပိုင် ဖြစ်ပြီပေါ့လေ။ နှစ်ထပ်တွေရော သုံးထပ်တွေရောလား။ ကုသိုလ်ရပါတယ်ဗျာ
ကိုချော ကပြန်လည်ဖေါ်ထုတ် ရေးပေးတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေ ဖတ်ရတော့ ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ရပြီး တစ်လှပ်လှပ်နဲ့ ခံစားရပါတယ်။
ကျွန်တော်ရွာထဲကိုရောက်တော့ အားပေးခဲ့တာတွေ၊ အကြံပေးတာတွေ၊ ကျွန်တော် မအားလို့ ရွာနဲ့ အဆက်ပြတ်နေချိန်လေးတွေမှာတောင် သတိတရလှမ်းမေးခဲ့တာလေးတွေက ကျွန်တော်အတွက် မေ့မရတဲ့ ရွာသံယောဇဉ်တွေပါ။
ကျွန်တော်ရွာထဲရောက်ကတည်းက စာတွေနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီး နေကြတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေ အားလုံးကိုလည်း ဒီနေရာကပဲ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့လည်း ပြောချင်ပါတယ်။
သတိတရနဲ့ ပြောချင်တာက စာတွေနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီး နေကြတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေထဲမှာ ပထမဆုံး အသံနဲ့ စခင်ရဖူးသူဆိုရင်လည်း ကိုချောပါပဲလေ။ နောက်အခွင့်ကြုံတုန်းလေးတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော့်ကို ရွာထဲမှာ မြန်မာအမည် “စိန်သော့” ကို စခေါ်ခဲ့တဲ့ ကိုပေါက်ဖော်ကိုပါ။ ရွာသူရွာသားတွေနဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကတော့ အများကြီးပါ။
ကျွန်တော်တို့ ရွာလေးထာဝရ စည်ကားသာယာနဲ့ ရွာသူရွာသားအားလုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိကြပါစေလို့ ဆုတောင်းမှုများနဲ့ –
လေးပေါက်ကတော့ပြောတယ် မန္တလေးသားတွေက ဧည့်ဝတ်ကျေတယ်တဲ့
မိုးဇက်ရေ ရောက်အောင်သာလာပါ နော် အပြောဖြစ်နေမှာစိုးလို့ ကိုစိန်သော့ ပြောသလို ပဲ လက်တွေ့ပြတော့မယ် မယုံရင်ကိုစိန်သော့ ကိုမေးကြည့် ( ပုန်းနေတာလို့ဖြေလိမ့်မယ် )
ကိုစိန်သော့ရေ မလာဖြစ်တာ စိတ်မရှိပါနဲ့နော်.. နောက်တခေါက်ပေါ့ သေချာလာပါ့မယ်
ပုံတွေပြန်ရှာချင်နေတာ ကိုဘလက်ရေ ကျေးဇူးပါ
ရပါတယ် pooch ခင်ဗျာ၊ ဆုံကြအုံးမှာပါ။ ကျေးကျေး
အိမ်ကလေးကို သူ တင်ကတဲက ဖတ်ဖူးတယ်
အခု ပြန်ဖတ်ဖြစ်တော့ သိန်း၁၈၀၀ တန် အိမ်တောင် ပက် ကနဲ ၀ယ်နိုင်တဲ့ သူဌေးပါလားလို့ တွေးမိသွားတယ် နောက်ဆုံးမှ စာကလေး အိမ်ဖြစ်နေတယ်
အဲဒီပို့စ် စဖတ်ရတုန်းက မှတ်မိနေတာ တစ်ခုရှိတယ် ဓါတ်ပုံလေးတွေက အရမ်းအသက်ဝင်တာပဲ ၊ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကြိုက်လို့ တခြားက ကူးလာပြီး ပြန်တင်ထားတယ် ထင်နေတာ နောက်တော့မှ တကယ့်ဆရာကြီးမှန်း သိလိုက်ရတယ် ၊ ဆရာသော့ရေ အချိန်ရရင် သင်ခန်းစာလေးတွေ ဆက်ပါဦး
ကိုဘလက်ကြီးလဲ တူးရလွန်းလို့ ညောင်းနေပြီ ထင်ရဲ့
ဆြာဆင့်မဟုတ်ရပါဗျာ…… ဆြာဂျီးမလုပ်ပါနဲ့…. ရင်တောင်တုန်တယ် :mad:
ဆက်စရာလေးတွေ ပြင်နေတာ အစသာရှိပြီး မဆုံးရသေးလို့
ဟုတ်ပါတယ် ကိုနိုရေ၊ ကျွန်တော်လည်း ကိုချောကြီးကို ကျေးဇူးတင်မဆုံးဖြစ်နေတာ…ကျွန်တော့် ရွာမှတ်တမ်းလေး သတိတရနဲ့ အချိန်တွေပေးပြီး တူးပေးတယ်။
ဒီနေရာမှာတော့..blackchaw ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကို ချီးကျူးတယ်ဗျာ..ရေးတဲ့လူဘယ်လောက်တော်တော်
အချိန်အများကြီးပေးပီး ဆောင်ရွက်နေတာ လေးစားအားကျမိပါရဲ့…
ကိုစိန်သော့ဆိုမှဖြင့် ပုံတွေက ရှယ်ပဲပေ့ါ။
(စာတွေထက် ပုံတွေကို ပိုသတိထားမိလို့။ အိမ်အပါအ၀င်)
မမ…. ရှုးတိုးတိုး….. သဂျီးကြားသွားမယ်။ :mad:
တူ့ဆာဗာက နော်တို့ပုံတွေကြောင့် လေးနေတာဗျ…. ဟိ
သများကတော့ ကိုကိုတော့ရဲ့ အမာခံအပျော့ခံ ပိတ်တတ်ဖြစ်ပါတယ်.
ကိုကိုတော့ရဲ့ပို့ စ်တော်တော်များများ သများဖတ်ပြီးပါပြီ…ချင့်
အ၀ှာမပြုလို့ ကွန်းမန့် အ၀ှာ မပြုဖြစ်တာပဲ ချိပါတယ်.
ဆောင်အုံးမှာ……… မမန့် မန့် ………… မန့်မန့် ချိူးပါဘူး…..အပျော့ခံ ပိတ်တတ်တွေကို…………… (စိန်မျိုးစိန်နွယ်ခြင်းတွေပဲ………..ဟာ)
အင်း.. ပုံပညာရှင်ကို ခုလို ဂုဏ်ပြုမှပဲ သေသေချာချာ တစ်နေရာထဲမှာ အားလုံး စုံစုံညီညီနဲ့ ဖတ်ပြီး ပုံလေးတွေ လေ့လာဖြစ်တော့တယ်။ ဦးစိန်သော့ကို စသိတုန်းက ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တုန်းက ဒီနှစ်တောင်ပြုန်းပွဲဆိုလားပဲ… ပုံလေးတွေ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ မမြင်ဖူးတာတွေလည်း မြင်ရတော့ အတော့်ကို စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်း မင်းကွန်းပုံတွေ မန္တလေးတစ်ဝိုက်က ပုံတွေနဲ့ ထပ်မံတွေ့ရပြန်တော့ အတော့်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပညာရှင်ပဲလို့ မြင်မိတယ်။ လေ့လာစရာ တစ်ပုံတစ်ပင်နဲ့ သင်ကြားပေးဖို့ ပြောပါရစေ….
ကျွန်တော်ရဲ့ လက်ရာလေးတွေကို အမှတ်တရ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ စကားလေးတွေကပဲ အားတစ်ခုဗျာ။ ဓါတ်ပုံပညာကတော့ ဝါသနာတူတွေ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးလို့ရအောင် ကျွန်တော်ရဲ့ http://www.facebook.com/KKDPC လေးရှိပါတယ်။
တူတူပဲ ဦးဦး blackchaw ရေ
ဒီပို့စ်လေးကတော့ ကျွန်တော် အလွန်အကြိုက်တွေ့ခဲ့တဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ခုပါ။
အစ်ကို ဘလက်ချော ရေအစ်ကိုပြောတဲ့ အစ်ကြိုက်ဆုံးဆိုတဲ့
ရွာသားတို့ရဲ့ တစ်နေ့တာဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးက ကျနော်လည်း တော်တော်ကြိုက်ခဲ့တယ်ဗျာ
အဲဒီပုံလေးတွေက ကျွန်တော်မနက်မနက်မှာ အိမ်ရှေ့ဝရံတာကနေ ကော်ဖီတစ်ခွက်၊ ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ အချိန်ပေးစောင့်ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို စုလိုက်တာပါ။ နှစ်သက်တာလေးကို သိရတော့ ကျေးဇူးပါဗျာ။
ခင်ဗျား ကောင်းမှုနဲ့ 
ကိုစိန်သော့ ကြည်ညိုစွာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့
ဝေဘူတောင်ပေါ်က မြတ်စွာဘုရားရှင် ရုပ်ပွားတော်မြတ် ကို
ကျွန်တော် ကန်နွန်း powershot SX40 ၀ယ်မလို့ ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာ ကိုဂီတို့ ဆရာသော့တို့ ပြောကြပါဦးဗျာ
ကနွန်းဆိုရင်တော့ နော်တို့ ဆြာဂီ ကမှ ပိုအသေးစိတ်တဲ့ အကြံပေးနိုင်ပါမယ်။ သူက နော်တို့တွေထဲမှာ ကနွန်းသမား စစ်စစ်ကြီး၊
ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောရရင် IMAGE SENSOR က Type 1/2.3 type back-illuminated CMOS ၊ Pixels က 12.1M ဆိုတော့ ဘယ်အတွက် မဆို လုံလောက်တဲ့ pixel ဗျာ။ မှန်ဘီလူးက 4.3 – 150.5 mm (35 mm equivalent: 24 – 840 mm) ဆိုတော့ ဆွဲရိုက်ပါလေ့ အဝေးကို။ Zoom focusing Type က TTL ၊ AF System က Points Face Detection, 1-point AF (Any position is available, fixed to centre or Face Select and Track) ၊ AF Modes က Single, Continuous (only available in Smart Auto mode), ဆိုတော့ ရိုက်ရမယ့် အခြေအနေတွေ အတွက် ကောင်းပါတယ်။ ISO sensitivity ဆိုရင် AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ထိသုံးလို့ရတယ်။
SHUTTER Speed က 1 – 1/3200 sec ၊ LCD Monitor က Vari-angle 6.8 cm (2.7”) ဆိုတော့ ကြည့်ရတာ အဆင်ပြေတယ်။ Movie ဆိုရင်လည်း (Full HD & HD) Up to4GB or 29 min. 59 sec.¹ ဆိုပဲ။
သူက Auto ၊ Program ကော Manual ပါသုံးလို့ရတော့ Pro ရိုက်ချက်တွေ အတွက် ပညာသုံး ရိုက်လို့ ရပါတယ်။
ဒါလေးနဲ့ အရင်ဖြေထားပါရစေဗျာ….(နောက်မှ ရေးပါဦးမယ်ဗျာ…)
ဆြာသော့တို့ကတော့ ကနွန်းဆိုတာနဲ့ ကို ဂီ တော့တာပဲ
ဆြာ အမ်လုလင် လည်း ကနွန်းပါဗျို့ …
ဂီရေ ကိုပေါက်ကတော့ ကင်နွန်ပေါက်စနလေးနဲ့ပါကွဲ့။
ဦးဖက်တီးလည်း ကနွန်း G12 နဲ့လို့ ဆိုထားလေရဲ့ဗျာ. …
ကနွန်း ပေါက်စလေးတွေ ဘာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ M-Lulin က လေးပေါက်ကို ပြောပြပေးခဲ့မှာပါဗျာ..သေချာပါတယ်
သည်ရက်ပိုင်း လေးပေါက် လက်ရာတွေ ကြည့်ရင် သိသာပါတယ်ဗျ….
သည်တခေါက် ရန်ကုန်လာတာ လေးပေါက် လက်ရည်တက်ဖို့ ဖြစ်လာတဲ့အတွက်
နောက်ပိုင်း မန်းလေးပုံတွေ ပိုမို လှပဝေဆာစွာရိုက်နိုင်လာတော့မယ့်အတွက်
လုလင်လေးပြောပြတာရယ် အတွေ့အကြုံရယ် ပေါင်းလိုက်တော့
အကိုရေ…ကျေးဇူးပါဗျာ ကျွန်တော့်တို့ရဲ့ အင်းဝ အကြောင်းပါတယ်လေ
ဇွဲမာန်ရေ၊ လုပ်ပါ။ အားပေးနေပါတယ်။
လုပ်ပါဗျို့ ဆြာဂီတို့ ဆြာမှော်တို့ နော်ဝယ်မယ့် canon sx40 အသေးစိတ်လေး နော်က ဆြာဂီရိုက်တဲ့မီးပန်းတွေ ဒါမျိုးတွေရှိုက်ချင်လို့
ဆြာသော့ တင်လည်းစမ်းချင်သေးတာ ဟယ်..မှားကုန်ပီ တင်ထားတဲ့ပို့စ်တွေပြောဘာဒယ်
အောင်မလေး………အသဲယားထှာ ………. မထိပ်သာမလန့်သာ…….
ဆြာအမ်လုလင် ကျန်ခဲ့လို့ဗျာ ပြန်သွားခေါ်လာတယ် ပြောပြနော် မပြောရင်ချိတ်ချိုးမှာဗျ(သစ်ကိုင်းခြောက်ကို်)
ကိုစိန်သော့ ဓာတ်ပုံတွေဆို အကုန် save ထားပြီး desktop မှာ အလှည့်ကျတင်ပါတယ်။
ကိုစိန်သော့ Diamond Key ကြီးကို လွမ်းမိလို့ ပြန်ရှာတော့..တိုက်တိုက်ဆိုင် ကိုဘလက်ပို့စ်ကိုသွားတွေ့တယ်…ကိုင်း ရွာထဲပြန်ရောက်ရော့လဟယ်.. :s: